သိပ္ပံပညာသည်စွဲလမ်းမှု၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမည်သို့ဖွင့်ပေးသည် (National Geographic) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ဘယ်လိုသိပ္ပံစွဲ (National Geographic) ၏လျှို့ဝှက်ချက်များသော့ဖွင့်သည်
မိမိကိုယ်ကိုရှုံးနိမ့်စေသောအလေ့အထများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်တွန်းအားအကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အသစ်များကထိုအကျင့်ကိုဖျောက်ရန်မည်သို့ကူညီနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလေ့လာသင်ယူသည်။ [တိုတောင်းသောဗီဒီယို Watch]
စွဲကဦးနှောက်ရဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်းပုန်းကွယ်တိုက်ခိုက်ခြင်း။ သိပ္ပံပညာရှင်များကကိုယ်ကျင့်တရားမြော်ရဲ့မြင်ကွင်းကိုစိန်ခေါ်နှင့်အလိုဆန္ဒ, Bing နှင့်လူသန်းပေါင်းများစွာ၏သောင်းချီကိုစုပ်ယူထားသောကြောင့်ဆုတ်ခွာ၏သံသရာတစ်ဦးထံမှထွက်ပေါက်ပူဇော်နိုင်ကြောင်းကုသမှုသုတေသနပြုနေကြသည်။
Janna မိုဃ်းကိုရွာစေမယ့်အလုပ်ဒဏ်ရာအဘို့အညွှန်းနာကျင်မှုဆေးပြားယူပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအကြာဘိန်းဖြူစွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူမတစ်ဦးဆီယက်တဲလ်အဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်မှာတစ်ဦးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ပျစခနျးတှငျနထေိုငျခဲ့သညျ။
မိမိအမိကိုမူးယစ်ဆေးစွဲဆက်ဆံဖို့လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်သူသည်ဆရာဝန်တစ်ဦးအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောတဲ့အခါပက်ထရစ် Perotti ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု။ "ငါသည်သူတစ်ဦး swindler တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့" Perotti ကပြောပါတယ်။
ဂျီနိုအာ, အီတလီအတွက် 38 နှင့်ဘဝတွေကိုသူသည် Perotti, 17, party မှကိုခစျြသူတစ်ဦးကြွယ်ဝသောဆိတ်သငယ်မှာကိုကင်း snorting စတင်ခဲ့သည်။ မိမိအအလိုလိုကျလှနျးခွငျးတဖြည်းဖြည်းနေ့စဉ်အလေ့အထ, ပြီးတော့တစ် All-စားသုံးမလှူသို့လှည့်။ သူသည်မေတ္တာထဲတွင်လဲနေတဲ့သားခဲ့ပြီးစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်။ မိမိအစွဲ၏အလေးချိန်လက်အောက်တွင်သူ့မိသားစုနှင့်စီးပွားရေးနောက်ဆုံးမှာပြိုကျ။
သူ rehab အတွက်သုံးလစစ်မှုထမ်းပြုသူ left ပြီးနောက် 36 နာရီပြန်ရောက်သွားတယ်။ သူကအခြားအစီအစဉ်တွင်ရှစ်လကြာသုံးစွဲခဲ့ပေမယ့်သူကအိမ်ပြန်နေ့ကို, မိမိကုန်သည်ကိုမြင်လျှင်နှင့်မြင့်မားတယ်။ "ငါသည်ဒေါသစိတ်နှင့်ကင်းသုံးစွဲဖို့စတင်ခဲ့" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ငါအကြောက်လွန်ရောဂါအစွဲအလမ်း, အရူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါရပ်တန့်ဖို့မဆိုလမ်းကိုမမွငျနိုငျတယျ။ "
မိမိအမိကိုဆရာဝန်ကိုခေါ်ဖို့သူ့ကိုဖိအခါ, Perotti အတွက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ သူဟာရုံသွားဆရာဝန်ရဲ့ကဲ့သို့သောကုလားထိုင်၌ထိုင်နှင့်ဆရာဝန်, Luigi Gallimberti, သီအိုရီအပေါ်မိမိခေါင်းကို၏လက်ဝဲဘက်နားက device ကိုကိုင်ပါစေရန်ရှိသည်မယ်လို့သင်ယူ ဒါကြောင့်ကိုကင်းသည်မိမိငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဖိနှိပ်လိမ့်မယ်။ "ဒါဟာချောက်ထဲသို့မဟုတ်ဒေါက်တာ Gallimberti ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်" ဟုသူကပြန်ပြောပြသည်။
ကုသမှုအပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်ရောက်သွားတယ်င်တဲ့သူတစ်ဦးကအလေးအနက်ကင်းစှဲလမျးသူ, ပက်ထရစ် Perotti နောက်ဆုံးတော့တစ်ခုစမ်းသပ်ကုသမှု-The Padua, အီတလီမှာရှိတဲ့ဆေးခန်းမှာမိမိ prefrontal cortex- မှလျှပ်စစ်သံလိုက်ပဲမျိုးစုံ application ကိုမှရောကျလာ။ ဒါဟာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ရောဂါ Luigi Gallimberti အလားတူအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအခြားအလူနာအပေါ် transcranial သံလိုက်ဆွရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သူနဲ့သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ဦးအကြီးစားရုံးတင်စစ်ဆေးစီစဉ်နေကြသည်။ အဆိုပါ technique ကိုယခုကမ္ဘာတဝှမ်းသုတေသီများအားဖြင့်စွဲလမ်း၏အခြားအမျိုးအစားများများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးလျက်ရှိသည်။
Gallimberti, 30 နှစ်ပေါင်းစွဲကုသခဲ့သူတစ်ဦးမီးခိုးရောင်ဆံပင်, bespectacled စိတ်ရောဂါနှင့် toxicologist, Padua တစ်ဦးဆေးခန်းပြေး။ transcranial သံလိုက်ဆွ (TMS) လို့ခေါ်တဲ့ technique ကို, ကြိုးစားရန်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစွဲ-နှင့်ရိုးရာကုသနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပျက်ထံမှများ၏သိပ္ပံသိသိသာသာတိုးတက်လာတှငျးမှ။ ဆေးဝါးကလူအရက်သောက်, ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူကို အသုံးပြု. ကိုကူညီနိုင်ပေမယ့် relapse ဘုံဖြစ်တယ်, ကိုကင်းများကဲ့သို့စိတ်ကြွဆေးမှစွဲလမ်းများအတွက်ထိရောက်သောဆေးဝါးကုသမှုဆေးတစ်လက်အဘယ်သူမျှမရှိတယ်။ "ဒါဟာဒီလိုလူနာကုသရန်အလွန်ခက်ပါတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။
200,000 လူတွေကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ရောဂါ, ထိုကဲ့သို့သော HIV ပိုးကဲ့သို့၎င်း, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရုံး၏အဆိုအရနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းမှ ပို. သေဆုံးရာမှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသေဆုံးသည်ထက်ပို။ ကျော်ဘီလီယံခန့်ကလူဆေးလိပ်သောက်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးသေမင်း၏ထိပ်ဆုံးငါးအကြောင်းတရားများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်နှလုံးရောဂါ, လေဖြတ်ခြင်း, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်မှု, နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါနှင့်အဆုတ်ကင်ဆာ။ နီးပါးတဦးတည်းသီးအ 20 အရွယ်ရောက်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အရက်စွဲဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမသေးလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်စှဲအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိမှုကိုအခြား compulsive လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ချိတ်ဆက်လူတွေကိုရေတွက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ opioid စွဲတစ်ခုကပ်ရောဂါဆိုးရွားရနေဆဲဖြစ်သည်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများမတိုင်မီရုံတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားယခင်စံချိန်ထက်ပိုပြီးဆေးညွှန်းကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများနှင့်ဘိန်းဖြူ-33,091 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အပါအဝင် opioids ထံမှ 2015 အတွက်စံချိန် 16 အလွန်အကျွံသုံးစွဲသေဆုံးမှု, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အကျပ်အတည်းကိုတုံ့ပြန်များတွင်စွဲပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက်ကိုအမေရိကန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ယေဘုယျရဲ့အစီရင်ခံစာနိုဝင်ဘာ 2016 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဒါဟာ 21 သန်းအမေရိကန်တွေကင်ဆာထက်ပိုပြီးအဖြစ်များသည့်ရောဂါဖြစ်စေမယ့်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်စွဲရှိသည်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမူးယစ်ဆေးစွဲသည့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များ၏ ဦး နှောက်ကိုရှာဖွေပြီးလူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ဦး နှောက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးနောက်စွဲလမ်းမှုသည်အလိုဆန္ဒ၊ အလေ့အကျင့်၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ သင်ယူမှု၊ ဆေးစွဲမှုသည် ဦး နှောက်ခန္ဓာဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒနှင့်ဆဲလ်မှဆဲလ်အချက်ပြမှုအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းမှာသင်ယူမှုအတွက်မော်လီကျူးစက်ယန္တရားဖြစ်သော synapses ဟုခေါ်သောအာရုံခံဆဲလ်များအကြားကွာဟချက်များအပါအ ၀ င်။ ဦး နှောက်၏အံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပလပ်စတစ်အားသာချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုသည်ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်၊ မိသားစုသို့မဟုတ်ဘဝကိုယ်နှိုက်ကဲ့သို့သောအခြားအကျိုးစီးပွားများကြောင့်ကိုကင်း၊ ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်ဂျင်တို့အားအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ရန်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆားကစ်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
"တစ်နည်းအား, စွဲသင်ယူတဲ့ရောဂါဗေဒပုံစံဖြစ်ပါတယ်" ဟု Antonello Bonci, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုမှာနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူကပြောပါတယ်။
Gallimberti ကိုစှဲခဲ့ သူ NIDA နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားဆန်ဖရန်စစ္စကိုတက္ကသိုလ် Bonci နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကစမ်းသပ်ချက်အကြောင်းကိုသတင်းစာဆောင်းပါးကိုဖတ်ရသောအခါ။ သူတို့ကကင်း-ရှာကြံကြွက်များတွင်အာရုံခံအတွက်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာနှင့်အပြုအမူဟန့်တားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်တစ်ဒေသသညျ့တိတ်ဆိတ်ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်ကမသိမမြင်နိုင်သောအမြန်နှုန်းနှင့်တိကျစွာနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်ဦးနှောက် manipulate ဖို့ဖိုင်ဘာမှန်ဘီလူးနဲ့မျိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာပေါင်းစပ်သော optogenetics အသုံးပြုခြင်းသည်သုတေသီများကြွက်များတွင်ဤ listless ဆဲလ် activated ။ "ကိုကင်းအတွက်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေခံအားဖြင့်ပျောက်ကွယ်," Bonci ကပြောပါတယ်။ အဆိုပါသုတေသီများသည် prefrontal cortex အတွက်, အပြုအမူဟန့်တားတာဝန်ရှိသည်လူ့ဦးနှောက်၏ဒေသလှုံ့ဆော်ဖို့မြင့်မားသောရဖို့တစ်ခုစှဲလမျးသူရဲ့ insatiable တတ်ပြီးချေမှုန်းရန်အံ့သောငှါအကြံပြုသည်။
Gallimberti TMS ကြောင်းလုပ်ဖို့လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းတစ်ခုပူဇော်စေခြင်းငှါ, စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်တိုင်းအတွေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအာရုံခံအကြား ZIP ကြောင်းလျှပ်စစ် Impulses သတင်းပို့အပေါ်ကို run ။ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဆက်ဆံဖို့နှစ်ပေါင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည့်ဦးနှောက်ဆွ, ကြောင်း circuitry ပုတ်။ အဆိုပါ device ကိုတစ်ဦး Wand အတွင်း၌တစ်ဦး coil ဝါယာကြိုးပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ လျှပ်စစ်လက်ရှိကမှတဆင့်ပြေးသောအခါ, Wand ဦးနှောက်ထဲမှာလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲစေတဲ့သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းဖန်တီးပေးပါတယ်။ Gallimberti ထပ်ခါတလဲလဲပဲမျိုးစုံတစ်ဦးအေးခဲကွန်ပျူတာပေါ်မှာ reboot ကဲ့သို့မူးယစ်ပျက်စီးအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါ, စဉ်းစားမိတယ်။
သူနဲ့သူ့အဖော်, neurocognitive စိတ်ပညာရှင် Alberto Terraneo, အ technique ကိုစမ်းသပ်ဖို့ Bonci အတူတက်ပူးပေါင်း။ သူတို့ကကိုကင်းစွဲ၏အုပ်စုတစုစုဆောင်း: 13 စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာတို့အတွက်ဆေးဝါးအပါအဝင်စံစောင့်ရှောက်မှုရရှိခဲ့စဉ်ဆယ့်ခြောက်ဦးနှောက်ဆွ၏တစ်လခံယူ။ တရားခွင်၏အဆုံးအားဖြင့်, ထိုဆွအုပ်စု, ဒါပေမယ့်သုံးဦးသာအခြားအုပ်စု 11 လူများ, မူးယစ်ဆေးလွတ်ကြ၏။
အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးဂျာနယ်တွင်၏ဇန်နဝါရီလ 2016 ပြဿနာ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဥရောပ Neuropsychopharmacology ။ ဒါကဆေးခန်းမှကိုကင်းသုံးစွဲသူရာပေါင်းများစွာဆွဲငင်ထားတဲ့လူသိရှင်ကြား၏ကသီ, သတိပေးခံရ။ Perotti ကတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းနှင့်တုန်လာ၏။ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်, သူကပြောပါတယ်, သူအေးဆေးတည်ငြိမ်သလိုခံစားရတယ်။ မကြာခင်မှာပဲသူကိုကင်းများအတွက်အလိုဆန္ဒဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဒါဟာနေဆဲခြောက်လအကြာမှာသွားပြီခဲ့သည်။ "ဒါဟာပြည့်စုံအပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့သည်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ကျွန်မနေတဲ့တက်ကြွခံစားရတယ်နဲ့ကျွန်မအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားခဲ့ရဘူးသောအသက်ရှင်ရန်အလိုရှိကြသည်။ "
ဒါဟာကုသမှုအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကြာရှည်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့ကြီးမားတဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled စမ်းသပ်မှုတွေယူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်စီစဉ်နေနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသုတေသီများကလူဆေးလိပ်သောက်, အရက်သောက်, လောင်းကစား, Bing စားနှင့်တလွဲ opioids ရပ်တန့်ကူညီပေးဖို့ဦးနှောက်ဆွစမ်းသပ်နေကြသည်။ "ဒါဟာဒါအလားအလာပါပဲ" ဟု Bonci ကပြောပါတယ်။ "လူနာတွေငါ့ကိုပြောပြပါ, 'ကင်းငါဖြစ်၏တဲ့သူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အခုတော့မဟုတ်တော့ငါ့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဝေးကွာသောအရာပါပဲ။ '' "
မကွာလွန်ခဲ့တဲ့ စွဲလမ်းကိုတိုက်ဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ဝါယာကြိုးပြုပြင်များ၏စိတ်ကူးအလှမ်းဝေးသလိုပဲကြလိမ့်မယ်။ သို့သော် neuroscience တိုးတက်လာစွဲ-သောအရာကိုအဲဒါကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကိုသမားရိုးကျအယူအဆတွေ upended ကြပါပြီ, ဘာကွောငျ့လဲလျှော့ဒါခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ 30 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုကျောင်းစာအုပ်ကိုဖွင့်ဖွင့်လျှင်, သင်စွဲသက်ရောက်မှုများကိုခံစားရရန် ပို. ပို. လိုအပ်, သည်းခံစိတ်တိုးပွားလာနှင့်အသုံးပြုမှုရပ်တန့်သည့်အခါတစ်အချိန်မှာအကုန်လုံးရုပ်သိမ်းထုတ်လုပ်အတူပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှီခိုဆိုလိုတယ်ဖတ်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းမွန်စွာအရက်, နီကိုတင်းနှင့်ဘိန်းဖြူရှင်းပြသည်။ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါလှုပ်, ပျို့ခြင်း, ဘိန်းဖြူဆုတ်ခွာ၏အန်စေမထားတဲ့, ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်းဘို့အကောင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။
relapse: အဟောင်းမော်ဒယ်ကိုလည်းစွဲလမ်း၏ဖြစ်ကောင်းအများဆုံး Insidious ရှုထောင့်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်မရှိတော့ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှီခိုဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်အဘယ်ကြောင့်လည်ချောင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ၏ပူနွေးသောချမ်းသာအတွက်ဝီစကီ၏မီးလောင်လူရှည်လျားသလော
အဆိုပါခွဲစိတ်ဆရာဝန်ယေဘုယျရဲ့အစီရင်ခံစာသိပ္ပံနည်းကျတည်ထောင်ခြင်းနှစ်ပေါင်းဟုသိရသည်ဘယ်အရာကိုထပ်လောင်းအတည်ပြု: စွဲနေတဲ့ရောဂါ, မကငျြ့ဝတျမြော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘဝရဲ့-မထိခိုက်စေအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်ပေမယ့်တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှု compulsive အထပ်ထပ်နေဖြင့်သေချာပေါက်မဟုတ်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမြင်ကိုစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများမပါဘဲဖြစ်နိုင်သမျှသောတစ်ချိန်ကအယူမှားတဲ့စိတ်ကူးကိုလက်မခံဖို့အများကြီးသိပ္ပံပညာရှင်များဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
၏လတ်တလောတည်းဖြတ်မူ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ, လောင်းကစားဝိုင်း: ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အမေရိကန် Psychiatry ၏လက်စွဲစာအုပ်တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ တချို့ကသိပ္ပံပညာရှင်များခေတ်သစ်ဘဝ-junk အစားအစာများစွာကိုသှေးဆောငျ, စျေးဝယ်ယုံကြည်ကြောင့်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် system ပေါ်တွင်၎င်းတို့၏အစွမ်းထက်သက်ရောက်မှု, တဏှာအခြေခံသည့် circuitry ၏အလားအလာစွဲလမ်းစမတ်ဖုန်း-ဖြစ်ကြသည်။
"ငါတို့ရှိသမျှသည်လက်ရာမြောက်သောဆုလာဘ် detectors အနေကြတယ်" ဟု Anna ကနှင်းဆီ Childress, စွဲမှု၏လေ့လာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ Pennsylvania ပြည်နယ်၏ Center မှာတစ်ဦးလက်တွေ့အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အမွေပါပဲ။ "
နှစ်ပေါင်း Childress နှင့်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များအကျိုးကို system ကိုလေ့လာနေခြင်းဖြင့်စွဲလမ်း၏နက်နဲသောအရာပျက်ပြယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ Childress ရဲ့သုတေသနတာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လမ်းအတိုင်းဦးနှောက်ထဲမှာသွေးစီးဆင်းမှုခြေရာခံတဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) စက်၏ပြွန်ထဲသို့မူးယစ်ဆေးစွဲသောလူလျှောပါဝငျသညျ။ ရှုပ်ထွေးသော algorithms များနှင့်အရောင်-နိုင်တဲ့ coding မှတဆင့်ဦးနှောက်ကို Scan ဖတ်ဦးနှောက် lusts တဲ့အခါမှာမြင့်မားတဲ့ဂီယာသို့ကန်သောဆားကစ်ကိုအတိအကျရှာရန်ကြောင်းပုံရိပ်တွေသို့ကူးပြောင်းနေကြသည်။
အနီရောင်ဆံပင်နှင့်တစ်ဦးကြီးတွေရယ်လျှံခဲ့သူ Childress, တစ်ဦးဒစ္စနေးရုပ်ရှင်သကဲ့သို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရောင်များ၏ပြီးတော့ Activision နေတာနှင့်အတူဦးနှောက်-မီးခိုးရောင်ဘဲဥပုံ၏ရုပ်ပုံပြခန်းမှတဆင့် scrolling, သူမ၏ကွန်ပျူတာမှာထိုင်တော်မူ၏။ "ဒါဟာ nerdy အသံ, ဒါပေမယ့်ငါနာရီအတွင်းဤပုံရိပ်တွေကိုကြည့်နိုင်, ငါပြုမည်" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကနည်းနည်းလက်ဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ စဉ်းစားရန်သင်အမှန်တကယ်ဒါအစွမ်းထက်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဒါအန္တရာယ်ရှိမယ့်တစ်ဦးဦးနှောက်ပြည်နယ်မြင်ယောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်ဖက်ရွက်ဖတ်နေနဲ့တူရဲ့။ ငါတို့မြင်အားလုံးကွန်ပျူတာ fuchsia နှင့်ခရမ်းရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်သို့လှည့်သောအစက်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်? "
အကျိုးကိုစနစ်, ကြွက်များတွင်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမကသောဦးနှောက်၏စရိုက်အပိုင်းကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာကိုရှာကမြင်ကွင်းများ, အသံ, ထိုအရပ်ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ပြကြောင်းရနံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးသေချာစေရန်တည်ရှိ။ ဒါဟာအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက်ယှဉ်ပြိုင်သူတို့ကိုတယ်မတိုင်မီစားနပ်ရိက္ခာနှင့်လိင်ရယူနိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်သည့်အခါအဘို့တည်ဗီဇနှင့်တုံ့ပြန်မှုများ၏ဘုံအတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ သို့သော်စနစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ 24 /7အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူကမ္ဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတက် trip နိုင်ပါတယ်။
အလိုဆန္ဒကဦးနှောက်လုပ်ရပ်တွေကိုတစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးအဆငျ့ဆငျ့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤများအတွက်ခလုတ်ဟာ neurotransmitter dopamine အတွက်ဆူးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ synapses ဖြတ်ပြီးအချက်ပြမှုများကိုသယ်ဆောင်သောဓာတုတမန်, dopamine ဦးနှောက်အတွက်ကျယ်ပြန့်-အထိအခန်းကဏ္ဍပါဝင်သည်။ စွဲဖို့အများစုမှာသက်ဆိုင်ရာ, dopamine ၏စီးဆင်းမှုကိုသိပ္ပံပညာရှင်များ salience, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု-ကိုကင်းများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆွဲဥပမာ, သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြူရောင်အမှုန့်တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းအဖြစ်ကသတိပေးချက်များ, မခေါ်အဘယျသို့ heightens ။ အလွဲသုံးစားလုပ်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ဦးကွဲပြားလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ဓာတုဗေဒအပေါ်သက်ရောက်မှု, ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဝေးသဘာဝအကွာအဝေးထက် ကျော်လွန်. မြင့်တက် dopamine အဆင့်ဆင့်ပို့လိုက်ပါ။ Wolfram Schultz တစ်တက္ကသိုလ်ကိန်းဘရစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ဒါအားကောင်းဓာတု drive ကိုအလိုဆန္ဒမ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာနည်းနည်းနတ်ဆိုး" dopamine စေသောဆဲလ်များကိုခေါ်ဆိုသည်။
ဘယ်လိုခိုး? သဘာဝက dopamine တူတဲ့နှင့်ပါကင်ဆန်ပြုမူဆက်ဆံရန်အသုံးပြုကြသည်ဆေးများ၏ထူးဆန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးစဉ်းစားပါ။ ဒီရောဂါအဓိကအားလှုပ်ရှားမှုကိုထိခိုက်, dopamine ထုတ်လုပ်ဆဲလ်တွေကိုဖျက်ဆီး။ Dopamine-အစားထိုးမူးယစ်ဆေးဝါးများလက္ခဏာများသက်သာရာပေမယ့်ဒီဆေးကိုယူသောသူသည်ပါကင်ဆန်လူနာအကြောင်းကို 14 ရာခိုင်နှုန်းကလောင်းကစားဝိုင်း, စျေးဝယ်, ညစ်ညမ်း, စား, သို့မဟုတ်ဆေးကိုယ်တိုင်ကမှစှဲဖွံ့ဖြိုး။ ဂျာနယ်ထဲမှာတစ်ဦးကအစီရင်ခံစာ လပ်ြရြားမြ Disordersသူတို့ကလိုအပ်ထင်သူစိမ်းများနှင့်မိတ်ဆွေများငွေပေးခြင်းအပေါ်ချိတ်ဆက် "မဆင်မခြင်ကျရော" အားဖြင့်စားသုံးဖွစျလာသူသုံးလူနာဖော်ပြသည်။
သင်ယူမှုမှတဆင့်ဆုလာဘ်များအတွက်အချက်ပြမှုများသို့မဟုတ်သတိပေးချက်တွေကို dopamine ၏အပွောငျးအလဲကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါလာကြ၏။ ဘား၏ပွင့်လင်းတံခါးကိုအထဲကဖိတ်မီးဖို၌ဖုတ် snickerdoodles များ၏အနံ့, စာသားသတိပေးချက်၏ ping ရဲ့, ဒါမှမဟုတ်စကားများသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုနှင့်ခလုတ်တဏှာ yank နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ Childress စွဲနေသောလူမျိုးသတိရှိရှိကြောင့်မိမိတို့အကျိုးကို system ကိုနှိုးဆှဖို့အတှကျ cue မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်မလိုပါကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေမယ့်လေ့လာမှုအတွက် PLoS တစ်ခုမှာ အက်ကွဲပိုက်များနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါး paraphernalia ဓါတ်ပုံများ 22 မီလီစက္ကန်ကြောင့်မျက်တောင်ခတ်ဖို့ကြာတဆယ်ဘို့တဘို့အချိန်ကိုအဘို့သူတို့မျက်မှောက်၌ရောက်ကြပါ၏နေချိန်မှာသူမကကိုကင်းစွဲပြန်လည်ထူထောင် 33 ၏ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေ။ လူတို့သညျသတိရှိရှိဘာမှ "ကိုကြည့်ပါ" မပြုခဲ့ပေမယ့်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်နိုင်မူးယစ်ဆေးတွေကို excite သောဆုလာဘ် circuitry ၏တူညီသောအစိတ်အပိုင်း activated ။
Childress ရဲ့အမြင်တွင်တွေ့ရှိချက်များကိုသူမသေးပြန်ရောက်သွားတယ်တဲ့သူကိုကင်းလူနာများထံမှကြားသိထားပါတယ်ပုံပြင်များကြောင့်သတိပေးခံရသောအရာကိုရှင်းပြနိုင်ဘူးထောက်ခံပါတယ်။ "သူတို့ကအချိန်အများစုကိုတဦးတည်းအရာသို့မဟုတ်အခြားကင်းဘို့အချက်ပြခဲ့ဘယ်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကအခြေခံအားဖြင့်ရှေးခေတ်ဆုလာဘ် system ကို tingled ကြောင်းရှိခြင်း, ရစေတယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကမသိဖြစ်လာခဲ့သည်အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံကြောင့်ကုန်းဆင်းအတိုင်းလှိမ့်တစ်ဦး snowball ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ "
သင်တန်း၏ဦးနှောက်, ဆုလာဘ်တစ်ခုကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထက်ပိုပါတယ်။ ဒါဟာစဉ်းစားအန္တရာယ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, ထွက်ပြေးသွားတဲ့အလိုဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရဲ့အများဆုံးခေတ်မီစက်ယန္တရားရတာဟာ။ အဘယ်ကြောင့်တဏှာနှင့်အလေ့အထများအကြောင်းပြချက်, ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်များနှင့်စွဲလမ်း၏သေဆုံးသူများ၏အသိအမြင်နိုင်သလဲ?
"သင်တက် messes တစ်ဦးအားကြီးသောမြည်းနတ်ဆိုးရှိတယ်," မှန်မှန်အက်ကွဲသောက်သူတစ်ဦးဒီလိုစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့အသံနှင့်တစ်ဦး burly လူကိုကပြောပါတယ်။
သူကသူ့ MRI ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ, မန်ဟက်တန်အတွင်းသိနာတောင်ပေါ်မှာဆေးပညာ၏ Icahn သည် School မှာသေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်ခန်းထဲမှာအနက်ရောင်ဆုံလည်ကုလားထိုင်များတွင်ထိုင်တော်မူ၏။ သူရီတာ Z. စတိန်း, ဦးနှောက်ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ, အ prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြောင်းကို Psychiatry နှင့် neuroscience ပါမောက္ခ၏ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါတယ်။ အဆိုပါစကင်နာသည်သူ၏ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်နေစဉ်, သူကတစ်ဦးချင်းစီပုံရိပ်ကို evokes သောအပျော်အပါးဒါမှမဟုတ်ဘေးဖြစ်စေစိတ်ကူးညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ကင်း၏ဓာတ်ပုံများကိုရှုမြင်ပါလိမ့်မယ်။ စတိန်းနှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်လူတွေကိုအရေးယူမှာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ neurofeedback, စွဲ compulsive အလေ့အထများပိုပြီးထိန်းချုပ်ယူကူညီပေးနိုင်ပါသည်ရှိမရှိစမ်းသပ်နေကြသည်။
"ကျွန်မစဉ်းစားမစောင့်, ငါမူးယစ်ဆေးပေါ်မှာရှိသမျှသောအသူကပြောတယ်ပိုက်ဆံဖြုန်းင့်မယုံကြည်နိုင်ပါတယ်" ဟုထိုလူကိုသူ MRI စက်မှဦးဆောင်မယ့်အဖြစ်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာသင်ဆုံးရှုံးသောအရာကိုနှိုင်းယှဉ်ရဖို့ဘာထွက်ထိန်းညှိကစားဘူး။ "
စတိန်းရဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများစွဲဟာ prefrontal cortex နဲ့အခြား cortical ဒေသများနှင့်ဆက်စပ်သည်ကိုမည်သို့ရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းအားဖြင့်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်၏နားလည်မှုကိုချဲ့ထွင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဦးနှောက်၏ဤအပိုငျးတှငျအအပြောင်းအလဲများအပြစ်ဒဏ်ကို Self-ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲမှချည်ထားသောအခြားအသိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ "ဆုကြေးဟာစွဲသံသရာ၏အစအဦးအတွက်အရေးကြီးပါသည်ပေမယ့်ရောဂါဆက်လက်အဖြစ်ဆုလာဘ်ဖို့တုန့်ပြန်လျှော့ချတာဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ စွဲလမ်းနှင့်အတူပြည်သူ့မကြာခဏသူတို့ရပ်တန့်သည့်အခါသူတို့ခံစားရဒုက္ခမှသက်သာရာရစေရန်မူးယစ်ဆေးဝါးများကို အသုံးပြု. ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။
2002 ခုနှစ်, နိုရာ Volkow, NIDA ၏ယခုညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်, စတိန်း iRISA ဟုခေါ်တွင်စွဲ, သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့် salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုသြဇာမော်ဒယ်ဖြစ်လာသည်အဘယ်အရာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့အိုင်ဒီယာအတွက်နာမည်တစ်ခုလုတ်ပါပဲ။ မူးယစ်ဆေးတွေကိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားရရှိသကဲ့သို့, အာရုံစူးစိုက်မှု၏လယ်ပြင်တဲ့ကင်မရာတဦးတည်းအရာဝတ္ထုပေါ်တွင်အတွက်ချုံ့ချဲ့ခြင်းနှင့်အမြင်ထဲကအခြားအရာအားလုံးတွန်းအားပေးကဲ့သို့ကျဉ်းမြောင်း။ ထိုအတောအတွင်းသူတို့အတွေကိုမျက်နှာ၌အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမှေးမှိန်။
စတိန်း, အုပ်စုတစုအဖြစ်ကိုကင်းစွဲ, အ prefrontal cortex အတွက်ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးချို့တဲ့မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချကြပါပြီ, သူတို့မှတ်ဉာဏ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအပေါ်စွဲကြသည်မဟုတ်သူတွေကိုထံမှကွဲပြားခြားနားလုပ်ဆောင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြသထားသည် ချမှတ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပိုက်ဆံအဖြစ် nondrug ဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်အစဉ်အမြဲမရပိုဆိုးလုပ်ဆောင်ပေမယ့်။ ဒါဟာအခြေအနေတွင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, fluency-မည်မျှလယ်ယာတိရိစ္ဆာန်များကိုတိုင်းတာတဲ့စံတာဝန်ပေါ်တွင်သင်တစ်မိနစ်အတွက်အမည်နိုင်သလဲစွဲနှင့်အတူ -people အဲလိုဘဲဖြစ်နိုင်တယ်။ စတိန်းမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောစကားများစာရင်းပြုစုဖို့သူတို့ကိုမေးတယ်သောအခါမူကား, သူတို့ကအခြားသူကိုလူတိုင်း outperform လေ့ရှိပါတယ်။ နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမှာမကြာခဏကြီးမြတ်ဖြစ်ကြပြီးမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးပါဝင်ကြောင်းတာဝန်များကိုကွပ်မျက်သို့သော်ဤဘက်လိုက်မှုဘယ်လောက် သိ. အခါရပ်တန့်ဖို့အပါအဝင်အခြားသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ, အလျှော့ပေးလိုက်လျောလိမ့်မည်။ အဆိုပါအမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်ချို့ယွင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကအခြားဦးနှောက်မမှန်အတွက်ထက်လိမ္မာသည် ဖြစ်. ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကပိုအကြီးအကျယ်အခွအေနကလွှမ်းမိုးပါတယ်။
စတိန်းရဲ့လေ့လာမှုတွေကြက်သား-and ကြက်ဥမေးခွန်းတစ်ခုကိုမဖြေကြဘူး: စွဲသောဤချို့ယွင်းစေပါသလား, ဒါမှမဟုတ်ဦးနှောက်မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်အားနည်းချက်များ, စိတ်ဒဏ်ရာ, စိတ်ဖိစီးမှု, သို့မဟုတ်အခြားအချက်များစွဲဖြစ်လာ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသလဲ? သို့သော်စတိန်းရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတိုကျရိုကျဦးနှောက်ဒေသများကလူမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးရပ်တန့်သည့်အခါအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်စတင်ကြောင်း tantalizing သက်သေအထောက်အထားများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ တစ်ဦးက 2016 လေ့လာမှုကြားနေသို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာခြောက်လပြန်ဖြတ်ခဲ့သူ 19 ကိုကင်းစွဲခြေရာခံ။ သူတို့ဟာအပြုအမူဟန့်တားခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အကဲဖြတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နှစ်ခုဒေသများတွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာသိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်။
မာ့ခ် Potenza အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင် Las Vegas မှာအဆိုပါလိုဏ်ဂူဘာသာစကား Venetian လောင်းကစားရုံမှတဆင့်။ အီလက်ထရောနစ်ဂိမ်းများကို-slot ကစက်တွေ, ကစားတဲ့, Blackjack, ဖဲချပ်ဝေ-Beep နှင့် clang နှင့် trill ။ Potenza တစ်ခုဖော်ရွေများနှင့်လုံ့လရှိသူယေးလ်တက္ကသိုလ်မှစိတ်ရောဂါနှင့် Impulse နှင့် Impulse Control ကို Disorders အပေါ်သုတေသနများအတွက်ကျောင်းရဲ့အစီအစဉ်၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, ခဲသတိထားမိပုံရသည်။ "ကျွန်မနေတဲ့လောင်းကစားသမားမဟုတ်ဘူး" ဟုသူကအနည်းငယ် shrug နှင့်သှားပွီး။ ပွုံးနှင့်အတူကပြောပါတယ်။ အပျော်အပါး Palazzo ထဲကသူတစ်ဦးမှစက်လှေကားကဆင်းအကြီးအကဲနှင့်သူတရာတစ်ဦးအကြောင်းကိုသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် Clinician မှလောင်းကစားဝိုင်းစွဲအပေါ်သူ၏သုတေသနပြုတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှိရာတွင် Sands ကုန်စည်ပြပွဲကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ, တစ်ဦးသက်သာစေသောဆေးကိုပေးအစည်းအဝေးအခန်းရှည်နားနေဆောင်မှတဆင့်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာ, Potenza နှင့်အခြားသူများအားဖြင့်လောင်းကစားဝိုင်းသုတေသနရံပုံငွေမတည်ပေးခဲ့သည်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်း-ထောက်ခံအုပျစုကစီစဉ်နေပါတယ်။ ဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ကျိကျိတက်စည်းဝေးကြီးဂလိုဘယ်ဂိမ်းကုန်စည်ပြပွဲ၏အကြိုအပေါ်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ Potenza လောင်းကစားသမားတွေအတွက်အဖြူကိစ္စသမာဓိရှိနှင့် cortical သွေးစီးဆင်းမှုအကြောင်းပြောနေတာ, ထိုစင်မြင့်မှာရပ်။ ကိုယ့်အခန်းတဘက်, ကုန်စည်ပြပွဲပြသခဲ့သည် dopamine နှစ်တစ်ထောင်အတွင်းစီးဆင်းရအင်ဂျင်နီယာတီထွင်မှု touting display တွေတက် setting နေကြသည်။ E-အားကစားလောင်းကစား။ Xbox အပေါ်လုပ်ပါတယ်ကာစီနိုဂိမ်းများကို။ ထက်ပိုမို 27,000 ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူ, ဒီဇိုင်နာများနှင့်လောင်းကစားရုံအော်ပရေတာကိုတက်ရောက်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။
Potenza နှင့်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များအမူအကျင့်စွဲ၏စိတ်ကူးကိုလက်မခံဖို့စိတ်ရောဂါတည်ထောင်ခြင်းတွန်း။ 2013 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးထဲမှာ "အခြားသောခွဲခြားမ Impulse Control ကို Disorder" ဟုခေါ်နေတဲ့အခနျးကွီးထဲကလောင်းကစားပြဿနာပြောင်းရွှေ့ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် နှင့်အခန်းထဲသို့ "ပစ္စည်း-Related နှင့်စွဲခြင်းရောဂါ။ " ဟုခေါ်ဒီမျှမျှသာအပွငျပုံမှဖြွစျသောအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာစွဲကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့ဆည်ချိုး," ယုဒသန်ဘရူ, မက်ဆာချူးဆက် Medical School ကျောင်းတွင်တက္ကသိုလ်စိတ်ထဲများအတွက် Center မှာသုတေသန၏ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။
သုတေသနလောင်းကစားဝိုင်းမူးယစ်ဆေးစွဲဆင်တူမည်သို့စုဆောင်းနေစဉ်အသင်းအဖွဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထက် ပို. အဘို့အဒီကိစ္စကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ လောဘ, အဆက်မပြတ်နှင့်မထိန်းချုပ်တိုက်တွန်းပါသည်။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်မီးရှူးမီးပန်းများခံစားရဖို့များမှာတိုးမြှင့်ပေးအပ်လာခဲ့ခြင်းစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း။ ကတိတော်များနှင့်သန်နိဋ်ဌာနျရှိနေသော်လည်းရပ်တန့်ဖို့တစ်ဦးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ Potenza လောင်းကစားသမားတွေ၏ပထမဦးဆုံးဦးနှောက်-ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအချို့ကိုပြုသူတို့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာဝန်ရှိသည်ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်နှေးကွေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ Scan ဖတ်ဆင်တူကွညျ့ရှုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယခုစိတ်ရောဂါကြောင်း တည်ထောင်ခြင်းစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများမပါဘဲဖြစ်နိုင်သမျှသောစိတ်ကူးလက်ခံ, သုတေသီများစှဲအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီအပြုအမူတွေကိုအဘယ်သို့အမျိုးအစားများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ အားလုံးပျြောမှေ့စလှုပ်ရှားမှုများအလားအလာစွဲလမ်းဖြစ်ပါသလား ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကအီးမေးလ်မှာတစ်မိနစ်-to-မိနစ်တစ်ချက်ကနေနှောင်းပိုင်း-နေ့လည်ခင်းသကြားလုံးချိုးဖို့, တိုင်းအလေ့အထ medicalizing နေကြသနည်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် ယခုဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ကဖိန်းဓာတ်-အသုံးပြုမှုရောဂါ debilitating, နာတာရှည်နှင့်အတူပိုမိုလေ့လာထိုက်တန်တစ်ဦးခွအေနအေအဖြစ်အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အင်တာနက်စွဲစေခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်စွဲလမ်း၏စိတ်ရောဂါ Jon Grant ကယ့်စာရင်းစေသည်။ ဒီတော့ compulsive စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်လိင်, အစားအစာစွဲလမ်းနှင့် kleptomania လုပ်ပါ။ "အလွန်အမင်းအကြိုးရဲ့တစ်စုံတစ်ရာ Euphoria ပီတိ induces သို့မဟုတ်ငြိမ်သက်ကြောင်းဘာမှ, စွဲလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်" လို့ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှာကိုစှဲ, compulsive နှင့် Impulse Disorders ဆေးခန်းပြေးသူကို Grant ကပြောပါတယ်။ အဲဒါကိုစွဲလမ်းပါလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုအခြားအချက်များအနက်မျိုးရိုးဗီဇ, စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်စိတ်ကျရောဂါကြောင့်ထိခိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အားနည်းချက်, ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ "ငါတို့ရှိသမျှသည်စွဲမရကြဘူး" ဟုသူကပြောပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် "သစ်" စှဲအရှိဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်အစားအစာနှင့်လိင်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦး primal အလိုဆန္ဒစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ယင်း၏နောက်လာမည့် edition အတွက်တစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်အပါအဝင်အကြံပြုထားပါတယ် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး, 2018 အားဖြင့်ထွက်မှုကြောင့်။ ဒါပေမယ့်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှပြဿနာအစစ်အမှန်ဟုတ်မဟုတ်အကြောင်းကိုအလေးအနက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံပြီးနောက်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ရောဂါရှာဖွေလက်စွဲစာအုပ်များအတွက် compulsive လိင်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့အစားအသောက်စွဲလမ်းကိုစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။
နီကိုးလ် Avena, New York မှာသိနာတောင်ပေါ်စိန့်လုကာဆေးရုံမှာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်သူတို့ကိုသင်ပါစေလျှင်ကြွက်တွင်းသကြားဓာတ် gobbling စောင့်မမည်ကြောင်းပြသထားပါတယ်, သူတို့ကသူတို့ကိုကင်းအပေါ်ချိတ်ဆက်ရသည့်အခါသူတို့လုပျသကဲ့သို့, သည်းခံစိတ်, တဏှာနှင့်ဆုတ်ခွာဖွံ့ဖြိုး။ သူမသည် High-အဆီပါတဲ့အစားအစာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောမွမ်းမံမုန့်ညက်အဖြစ်အလွန်အမင်းလုပ်ငန်းများ၌အစားအစာများသကြားသကဲ့သို့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Avena နှင့်မီချီဂန်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီတွေကမကြာသေးမီက 384 လူကြီးများစစ်တမ်းကောက်ယူ: ကိုးဆယ်-နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအချို့သောအစားအစာများကိုစားရန်မလြှော့လိုဆန္ဒအစီရင်ခံခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ဖို့မအောင်မြင်ကြိုးစားမှု, စွဲလမ်းနှစ်ခုထူးခြားချက်ထပ်ခါတလဲလဲ။ အဆိုပါဖြေဆိုသူပီဇာ-ပုံမှန်အားဖြင့်အဖြူရောင်-မုန့်ညက်အပေါ်ယံလွှာနှင့်ဖွဲ့နှင့်ဒုတိယနေရာကိုချည်ထားချစ်ပ်နဲ့ချောကလက်နှင့်အတူ, သကြား-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်-အဖြစ်အများဆုံးစွဲလမ်းအစားအသောက်နှင့်အတူထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။ Avena အစားအသောက်စွဲလမ်းအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်မျှသံသယရှိပါတယ်။ "ဒါကလူတွေကိုအဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်အဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းပါပဲ။ "
သိပ္ပံကိုပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ခဲ့ အဲဒါကိုဖြေရှင်းမယ့်နည်းလမ်းတွေကြံစည်အတွက်ထက်စွဲကဦးနှောက်ထဲမှာကော်လံကလွဲနေတယ်တတ်သောအရာကို charting ၌တည်၏။ အနည်းငယ်ဆေးဝါးများကြောင့်လူအခြို့သောစှဲကျော်လွှားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, naltrexone opioid အလွဲသုံးစားလုပ်ဆက်ဆံဖို့တီထွင်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းခုတ်လှဲသို့မဟုတ်အရက်သောက်, Bing စားများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းကိုရပ်တန့်ကိုကူညီသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
Buprenorphine ကဦးနှောက်ထဲမှာဒါပေမဲ့ဘိန်းဖြူမထက်အများကြီးငယ်ဒီဂရီမှ opioid receptors မြှင့်လုပ်ဆောင်။ လူတွေကိုစွဲလမ်းစေပုံစံများကိုချိုးဖျက်နိုင်အောင်အဆိုပါဆေးဝါးတဏှာနှင့်ဆုတ်ခွာ၏ရွားလှလက္ခဏာတွေဖိနှိပ်။ "ဒါဟာအံ့ဖွယ်ပါပဲ" ဟုကို Justin Nathanson, Charleston, တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားထဲမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ပြခန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးကပြောပါတယ်။ သူဟာနှစ်ပေါင်းဘိန်းဖြူကိုသုံးခြင်းနှင့်နှစ်ကြိမ် rehab ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ပြန်ရောက်သွားတယ်။ ထိုအခါဆရာဝန်တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသော buprenorphine ။ "ငါးမိနစ်၌ငါလုံးဝပုံမှန်ခံစားရတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ သူ 13 နှစ်ပေါင်းဘိန်းဖြူကိုသုံးမထားပါဘူး။
စွဲကုသရန်အသုံးပြုအများစုမှာဆေးဝါးနှစ်ပေါင်းန်းကျင်ခဲ့ကြပြီ။ neuroscience အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်လာနေတဲ့အောင်မြင်မှုများရောဂါပျောက်ကင်းထုတ်လုပ်ရန်သေးရှိသည်။ သုတေသီများဒြပ်ပေါင်းများကိုများစွာစမ်းသပ်ပြီးကြပေမယ့် Lab ထဲမှာအများအပြားပြသဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနေစဉ်, လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ရလဒ်တွေကိုမှာအကောင်းဆုံးရောနှောခဲ့ကြပြီ။ စွဲကုသမှုမကြာသေးမီကမှ neuroscience ရှာဖွေတွေ့ရှိတစ်ခု outgrowth များအတွက်ဦးနှောက်ဆွနေဆဲစမ်းသပ်ဖြစ်ပါတယ်။
12-ခြေလှမ်းအစီအစဉ်များ, သိမြင်မှုကုထုံးနှင့်အခြား psychotherapeutic ချဉ်းကပ်များစွာသောလူအဘို့အပြောင်းလဲတွေဟာသော်လည်း, သူတို့သည်လူတိုင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, နှင့် relapse နှုန်းထားများမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
စွဲကုသမှုကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ခုစခန်းများရှိပါတယ်။ တစ်ခုမှာတစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းကာတွဲဖက်အဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူဆေးဝါးသို့မဟုတ် TMS တူသောနည်းစနစ်ကနေတဆင့်စွဲကဦးနှောက်၏ပျက်ယွင်းနေဓာတုဗေဒသို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးကိုပြုပြင်တာတွေအတွက်တည်ရှိသည်ယုံကြည်သည်။ အခြားတွဲဖက်လူတွေကိုစွဲလမ်းပြန်လည်နာလန်ထူရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုနေချိန်တွင်တဏှာနှင့်ဆုတ်ခွာ၏ဝဒေနာကိုလျှော့ချဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဆေးဝါးမြင်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးစခန်းများတွင်တဦးတည်းအရာအပေါ်သဘောတူ: လက်ရှိကုသမှုတိုတောင်းကျရောက်ပါတယ်။ "ဒီအတောအတွင်းငါ့အလူနာခံစားနေရပြီးနေကြတယ်" ဟုဘရူ, မက်ဆာချူးဆက်အတွက်သတိသုတေသီကဆိုပါတယ်။
ဘရူဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ပညာ၏ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်းစွဲအထူးသူတစ်ဦးစိတ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ သူစွဲကုသမှုအတွက်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်ခေတ်သစ်သိပ္ပံနှင့်ရှေးခေတ်စဉျးစားဆငျခွအလေ့အကျင့် melding တည်ရှိသည်ယုံကြည်သည်။ သူကအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ကြံအပြုအမူမောင်းထုတ်ကြောင်းအလေ့အထများမှကျနော်တို့လုပ်နေတာနဲ့ခံစားနေတာဘယ်အရာကိုမှအသိပညာရောက်စေဖို့ဘာဝနာနှင့်အခြားနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်အရာ, သတိတစ်ခုဧဝံဂေလိဆရာပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးအခေါ်ခုနှစ်, တဏှာအားလုံးဆင်းရဲဒုက္ခအမြစ်အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်သို့မဟုတ်ဘရူရဲ့အုပ်စုများလူတွေကိုဆောင်ကြဉ်းသောအခြားအ compulsive အချို့အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သတိခေတ်ပြိုင်အသက်တာ၏ dopamine ရေလွှမ်းမိုးတန်ပြန်နိုင်မကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကသတိအပေါ်အခြေခံပြီး program တစ်ခု 12-ခြေလှမ်းအစီအစဉ်များထက်မူးယစ်စွဲ relapse တားဆီးတွင်ပိုမိုထိရောက်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးဦးခေါင်း-to-ခေါင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခုနှစ်, ဘရူသတိလေ့ကျင့်ရေးရွှေ-စံအမူအကျင့် antismoking အစီအစဉ်ကိုအဖြစ်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ထိရောက်သောခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
သတိသူတို့ကိုတုံ့ပြန်မပါဘဲမတရားသောအာရုံစိုက်ဖို့လူတွေကိုလေ့။ အဆိုပါအယူအဆပြင်းထန်သောဆန္ဒ၏လှိုင်းကိုထုတ်စီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သတိလည်းသူတို့လုပ်ကြဖို့ဆွဲထုတ်ခံစားမိအဘယ်ကြောင့်သတိပြုမိဖို့လူအားပေးထားသည်။ ဘရူနှင့်အခြားသူများဘာဝနာဟာ posterior cingulate cortex, စွဲ၏ loop တစ်ခုဆီသို့ဦးတည်နိုင်သည်ဟုမွေးမြူရေးများ၏ကြင်နာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအာကာသ quiets ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
ဘရူသင်သည်သင်၏ကုထုံးအတွက်ချင်တယ်ချင်ပါတယ်ဟာပြော့တန်ချိန်အတွက်ပြော၏။ မိမိအစာကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျအသုံးအနှုန်းများ-hippocampus, insula-နှင့်ပါဠိ, ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတစ်ဦးဘာသာစကားအကြား toggle ။ မကြာသေးခင်ကညနေခင်းတွင်သူသည်အဝါနုရောင်ရှိသောပုံသွင်းပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်အတွက်စက်ဝိုင်းခြမ်း၌ထိုင်သူကို 23 စိတ်ဖိစီးမှုစား၏ရှေ့မှောက်၌၎င်းတို့၏စုဆောငျးခွကေို nestling အနီရောင်ပတ်ပတ်လည်ကူဆိုလိုတာပါ။
Donnamarie Larievy တစ်စျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်နည်းပြ, သူမ၏ရေခဲမုန့်နဲ့ချောကလက်အလေ့အထကိုချိုးဖျက်ဖို့အပတ်စဉ်သတိအုပ်စုတစ်စုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ လေးလအတွင်းသူမကျန်းမာအစားအစာစားခြင်းနှင့်နှစ်ဆ fudge တစ်ခုရံဖန်ရံခါကျုံးအတော်ပင်ပေမယ်ခဲကမြျှောလငျ့တောငျ့အတွက်။ "ဒါဟာဘဝရဲ့ changer ခဲ့" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "အောက်လိုင်း, ငါ့မတရားသောလျော့နည်းသွားပြီ။ "
နေသန်အာဗေလဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အရက်သောက်-အကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုရပ်တန့်ရန်။ ဇူလိုင်လ 2016 ခုနှစ်တွင်သူတစ်ဦးသုံးရက်ကြာ, ဂျင်လောင်စာ bender ပြီးနောက် hallucinating, Charleston အတွက်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနား၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွင်အရေးပေါ်ခန်းထဲမှာတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကုသမှုခံယူနေစဉ်, သူကအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Colleen အေ Hanlon က TMS လေ့လာမှုများအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း။
အာဗေလသည်, 28, circuitry ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သူတစ်ဦးလက်သမားနှင့်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်, မှ neuroscience ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုကယ်ဆယ်ရေးတစ်အသိပေး။ သူကဇီဝဗေဒခြင်းဖြင့်ပိတ်မိနေသို့မဟုတျသူ၏အရက်သောက်ဘို့တာဝန်၏ချွတ်မခံစားရပါဘူး။ အဲဒီအစားသူကဒီထက်အရှက်ကွဲခြင်းကိုခံစားရ၏။ "ငါသည်အစဉ်အမြဲနေတဲ့အားနည်းချက်အဖြစ်သောက်သုံးစဉ်းစားပါ" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဤမျှလောက်အာဏာကိုကရောဂါရဲ့နားလည်ရှိပါတယ်။ "
သူကဦးခေါင်းကိုဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာကသူ၏ပြန်လည်နာလန်ထူ-ဆေးမှာကမ်းလှမ်းသမျှ, psychotherapy, ထောက်ခံမှုအုပ်စုများနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက် zaps ပစ်ပါ။ "ဒီဦးနှောက်ကိုယ်တိုင်ကပြန်ဆောက်နိုင်ပါတယ်" လို့သူကပြောပါတယ်။ "ဒါကအများဆုံးအံ့သြဖွယ်အရာပါပဲ။ "